KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Bere a wɔresi asɔrefi no, nkurɔfo teetee wɔn (1-6)
Atamfo kɔbɔɔ wɔn sobo wɔ Ɔhene Artasasta anim (7-16)
Artasasta maa asɛm no ho mmuae (17-22)
Ɔma wogyaee adwuma no (23, 24)
4 Bere a Yuda ne Benyamin atamfo+ tee sɛ wɔn a wokodii obi man so a wɔasan aba no+ resi asɔrefi ama Yehowa, Israel Nyankopɔn no, 2 ntɛm ara na wɔkɔɔ Serubabel ne agyanom mmusua mu mpanyimfo no nkyɛn kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma yɛne mo nsi dan no, efisɛ yɛsom mo Nyankopɔn*+ te sɛ mo ara, na efi Asiria hene Esar-Haddon+ a ɔde yɛn baa ha no+ bere so na yɛabɔ afɔre ama no.” 3 Nanso Serubabel ne Yesua ne Israel agyanom mmusua mu mpanyimfo a wɔaka no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yɛne mo nni hwee yɛ wɔ yɛn Nyankopɔn dan a yɛresi no mu,+ yɛn nkutoo besi ama Yehowa, Israel Nyankopɔn no, sɛnea Persia hene Kores ama yɛn ahyɛde no.”+ 4 Efi saa bere no, daa na asaase no sofo bu Yudafo no abam* na wotu wɔn koma wɔ ɔdan no si ho.+ 5 Wɔbɔɔ afotufo paa sɛ wɔnsɛe Yudafo no agyinatu+ wɔ Persia hene Kores nna nyinaa mu, na wɔkɔɔ so ara yɛɛ saa kosii Persia hene Dario+ bere so. 6 Ahasweros ahenni no mfiase no, wɔkyerɛw krataa de bɔɔ wɔn a wɔtete Yuda ne Yerusalem sobo. 7 Persia hene Artasasta bere so nso, Bislam, Mitredat, Tabeel, ne ne mfɛfo kyerɛw krataa kɔmaa Ɔhene Artasasta; wɔkyerɛɛ ase kɔɔ Aram kasa+ mu; wɔde Aram nkyerɛwde na ɛkyerɛwee.* 8 * Ɔhene soafo panyin Rehum ne ɔkyerɛwfo Simsai kyerɛw krataa kɔmaa Ɔhene Artasasta de bɔɔ Yerusalemfo sobo. 9 (Wɔn a wɔka ho ni: Ɔhene soafo panyin Rehum ne ɔkyerɛwfo Simsai ne wɔn mfɛfo a wɔaka no ne atemmufo, amansin asoafo, akyerɛwfo, wɔn a wofi Erek,+ Babilonia, ne Susa,+ kyerɛ sɛ, Elamfo.+ 10 Ebi nso ne aman a aka a onuonyamfo kɛse Asenapar tuu wɔn ase kɔɔ Samaria nkurow mu+ ne wɔn a wɔaka a wɔwɔ Asubɔnten no* agya no; 11 krataa a wɔde kɔmaa no no mu nsɛm ni:) “Yɛde kɔma Ɔhene Artasasta; efi wo nkoa a wɔwɔ Asubɔnten no agya no hɔ: 12 Ma ɔhene nhu sɛ Yudafo a wofi wo nkyɛn baa ha no abedu Yerusalem, na wɔresan akyekye atuatewfo kurow bɔne no; wɔreto afasu no,+ na wɔresan ato fapem no. 13 Enti ma ɔhene nhu sɛ, sɛ wɔsan kyekye kurow yi na wosi n’afasu no wie a, wɔrenyɛ amanne anaa wɔrentua akwan so tow anaa tow+ biara, na Ahemfo rennya hwee wɔ wɔn akorade mu. 14 Na esiane sɛ w’ahemfi na yedi nkyene* nti, yɛrentumi nhwɛ mma nea ɛsɛ ɔhene mmɔ no, enti na yɛasoma sɛ wɔmmɛka nkyerɛ ɔhene no. 15 Enti ma wɔnhwehwɛ w’agyanom kyerɛwtohɔ+ mu, na wubehu wɔ mu sɛ saa kurow no yɛ atuatewfo kurow a ɛsɛ sɛ Ahemfo ne amantam hwɛ wɔn yiye paa, na efi tete na emu nnipa apiapia nkurɔfo ama wɔatew atua. Ɛno nti na wɔsɛee kurow no.+ 16 Enti yɛrema ɔhene ahu sɛ, sɛ wɔsan kyekye saa kurow no na wowie n’afasu no a, nsaase a ɛwɔ Asubɔnten yi agya+ ha befi wo nsa.” 17 Ɔhene no soma ma wɔde mmuae brɛɛ ɔhene soafo panyin Rehum ne ɔkyerɛwfo Simsai ne wɔn mfɛfo a wɔaka a wɔtete Samaria ne wɔn a wɔaka a wɔtete Asubɔnten no agya no sɛ: “Asomdwoe nka mo! 18 Krataa a mode brɛɛ yɛn no, wɔakenkan ma emu ada hɔ* wɔ m’anim. 19 Me nso mahyɛ ma wɔahwehwɛ mu, na wɔahu sɛ efi tete na kurow no ne Ahemfo adi asi, na ɔsɔretia ne atuatew akɔ so wɔ hɔ.+ 20 Ahemfo akɛse na wodii Yerusalem so, na wodii wɔn a wɔtete Asubɔnten no agya nyinaa nso so; wogyigyee amanne ne tow ahorow. 21 Enti monhyɛ mma saa mmarima no nnyae adwuma no; wonnyae kurow no kyekye kosi sɛ mɛhyɛ mmara foforo. 22 Monhwɛ yiye na moammu mo ani angu ahyɛde yi so na ɔhene anhwere ade kɛse.”+ 23 Bere a wɔkenkan Ɔhene Artasasta krataa no wɔ Rehum ne ɔkyerɛwfo Simsai ne wɔn mfɛfo anim no, ntɛm ara na wɔkɔɔ Yudafo no nkyɛn wɔ Yerusalem kɔhyɛɛ wɔn ma wogyaee adwuma no. 24 Saa bere no na wogyaee Onyankopɔn fi no ho adwuma a na wɔreyɛ wɔ Yerusalem no; wogyaee kosii Persia hene Dario ahenni afe a ɛto so abien no mu.+
^ Nt., “yɛhwehwɛ mo Nyankopɔn akyi kwan.”
^ Nt., “ma Yudafo no nsam gow.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔkyerɛwee wɔ Aram kasa mu na afei wɔkyerɛɛ ase.”
^ Nsɛm a ɛwɔ Esr 4:8 kosi 6:18 no, wodii kan kyerɛwee wɔ Aram kasa mu.
^ Anaa “w’ahemfi na yegye yɛn akatua.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔakyerɛ ase akenkan.”